15 Qoxooti Suuriyaan Ah Oo Ku Dhintay Baraf Iyo 11 Turki Ah Oo Shil Baabuur Ku Geeriyooday - Wargane News
Home Somali News 15 Qoxooti Suuriyaan Ah Oo Ku Dhintay Baraf Iyo 11 Turki Ah...
Waxay intaa ku dareen in ilaa 46 qof ay ku dhaawacmeen. Habeen hore ayuu basku ka soo baxay magaalada caasimadda ee Ankara, wuxuuna u socday magaalo loo dalxiis tago oo la yidhaahdo Uludag, taasoo u dhow magaalada Bursa.
Wuxuu ku dhacay geedo ku yaalla gobolka Eskisehir, iyadoo xaaladda waddaduna ay wanaagsanayd.
Badhasaabka gobolka Eskisehir, Ozdemir Cakacak, oo ay soo xiganaysay wakaaladda wararka Doagan ayaa sheegay inayna caddayn sababta dhalisay shilka, iyadoo barafka waddada yallay aanu ahayn mid fadhiistay.
Wuxuu intaa ku daray in dadkii ku dhaawacmay lagu dawaynayo dhowr Cisbitaal oo kala duwan.
Weli lama oga in carruuri ku jirtay dadka dhibaatadu ku dhacday. Labada dirawal oo dhaawac sahlan uu soo gaadhay ayaa la xidhay, waxaana la bilaabay baadhitaan, sida ay wakaaladda Dogan sheegtay.
Turkiga ayaa leh taariikh liidata oo ah xagga dhanka bed-qabka waddooyinka, iyadoo ay dhaceen ilaa hal Milyan oo shil sannadkii 2016, ayna ku dhinteen 7,300 oo qof, sida uu dhigayo tirakoob laga soo xigtay saraakiil oo ay ku soo warrantay wakaaladda wararka AFP.
Dhanka kale, 15 qaxooti Suuriyaan ah oo qaarkood Carruur ahaayeen ayaa la helay iyagoo barafoobay oo sidaa ku dhintay, mar ay isku dayayeen inay ka gudbaan dhulka buuraleyda ah ee xuduudda Lubnaan.
13 meyd ah ayaa Jimcihii la helay, laba kalena Sabtidii ayaa la helay, ka dib markii nawaaxigaas uu ku dhuftay baraf duufaan watay.
Saraakiil ka tirsan Lubnaan ayaa meydadka helay, ka dib markii la soo gaadhsiiyey in koox qaxooti ah ay ku dhibaataysan yihiin meel u dhow Masnaa.
Warar deegaanka ka imaanaya waxay sheegayaan in dadkaas ay goobta kaga tageen qolooyin tahriibinayey.
Labo ka tirsan qolooyinkaas ayaa la qabtay. Dhowr qof oo qaxootiga ka mid ah ayaa la badbaadiyey, waxaana ku jiray wiil yar oo la helay isagoo garan la’ meel uu u dhaqaaqo.
Kooxda ayaa qaaday isla marinkii ay hore u qaadeen boqolaal kun oo Suuriyaan ah oo ka cararayey dagaalka dalkooda ka socda.
Lubnaan oo ay ku nool yihiin ilaa 4 Milyan oo qof ayaa qaadatay ilaa hal milyan oo Suuriyaan ah, tan iyo markii uu dagaalku billowday 2011.